Angelina, Angelina Jolie, Angelina Jolie Voight, omee, Jolie, onye na-emepụta ihe, onye nduzi
Angelina Jolie Pitt, a mụrụ dị kaAngelina Jolie Voight(* 4 June 1975 Los Angeles, California) bụ nwanyị na-ese ihe nkiri nke America na onye nnọchianya pụrụ iche nke Òtù Na-ahụ Maka Ndị Gbara Ọsọ nke Mba Ndị Dị n'Otu. Ọ bụ nwa nwanyị American actor Jon Voight.
Na mbụ ọ rụrụ ọrụ dịka ihe nlereanya. A na-akpọkarị ya dị ka otu n'ime ụmụ nwanyị kachasị mma n'ụwama ọ bụghị nanị ịgwa ndị mgbasa ozi tabloid banyere ndụ onwe ya. Ọ bụ onye mmeri nke atọ Golden Globe Awards na Oscar Oscar.
Ọ na-arụ ọrụ ọ na-arụ na fim dị alaCyborg nke Abụọ: Iko Oke(1993). O bu ụzọ kpoo fimNetwork dị ize ndụ(1995). Ọ gụrụ na fimGeorge Wallace(1997) aGIA(1998), nke nwere nkatọ ziri ezi. Oscar meriri ọkwá kacha mma na-enyere ndị omeeji akaNsogbu(1999). Mba a ma ama enwetawo ekele maka ọrụ nke Lary Croft, heroine nke usoro egwuregwu kọmputatomb raider, na fimLara Croft - Tomb Raider(2001). Kemgbe ahụ, a họpụtara ya n'etiti otu kpakpando kasị mara amara nke kachasị mma na Hollywood. Enweela nnukwu ihe ịga nke ọma n'ahịa ka edere ya na ihe omumaMr. & Mrs. Smith(2005) na ihe nkiri nkiriKung Fu Panda(2008) aKung Fu panda 2(2011).
Alụmdi na nwunye ya na ndị na-eme ihe nkiri bụ Jonny Lee Miller na Billy Bob Thornton kwụsịrị ịgba alụkwaghịm. Ebe ọ bụ na 2005 bi na omee egwu Brad Pitt ebe 2014 lụrụ di na nwunye. Mkpakọrịta ha na-adọta mgbasa ozi na ụwa dum.Tinyere Pitt, ha nwere ụmụ nwanyị Shiloh na Vivienne na ụmụ Knox, ha sokwa ụmụ Maddox, Zahar na Pax. Ọ na-etinye aka na ọrụ enyemaka ụmụ mmadụ gburugburu ụwa, karịsịa banyere nsogbu ndị gbara ọsọ ndụ n'ime UNHCR.
A mụrụ ya na Los Angeles, California. Ọ bụ ada Jon Voight na Marcheline Bertrand. Nwanne ya nwoke bụ omee James Haven, onye na-abụ abụ na onye na-ede egwú Chip Taylor. Ọ bụ nna nna nke ndị na-eme ihe nkiri Maximilian Schell na Jacqueline Bisset. Mgbe nna ya ketara ọbara German na Slovak,nne ya gbakọtara French-Canada, Dutch na German.Dịka mama ya, Angelina nwere mmetụta dịka Iroquois.Nanị nna ya bụ onye a maara ama bụ nwanyị Huron mụrụ na 1649.
Jon Voight for Academy Awards (Oscars) na 1988; Jolie n'azụ aka nri ya
Mgbe nne na nna ya kwụsịrị na 1976, ya na nwanne nne ya, bụ onye hapụrụ ya na-achọsi ike maka ịzụlite nwa.Dịka nwatakịrị, Jolie na-elekarị fim ya na nne ya, nke o kwetara na e mesịrị, bụ otu n'ime ihe ndị mere ka ọ bụrụ onye na-eme ihe nkiri; nna ahụ adịghị emetụta ya.Mgbe ọ dị afọ isii, ezinụlọ (ya na onye nne na nna ya, onye na-emepụta Bill Day) kwagara New York;ha laghachiri Los Angeles afọ ise mgbe e mesịrị. Angelina Jolie kpebiri ime ya ka ọ na-arụ ọrụ, wee banye na ụlọ ọrụ na-eme ihe nkiri Lee Strasberg, ebe ọ nọrọ afọ abụọ n'ịrụ ọrụ dị iche iche.
Na 14, ọ hapụrụ ụlọ akwụkwọ ahụ wee sị na ọ chọrọ ịghọ onye nlekọta ụlọ olili ozu.Ọ malitere ịrụ ọrụ dịka ihe nlereanya, na-egwu ọtụtụ n'ime ihe ngosi na Los Angeles, New York na London. N'oge a, ọ na-aga oji ma, ya na ndị enyi ya mgbe ahụ, jiri BDSM na-egwu egwu.Mgbe mmekọrịta ahụ gwụchara mgbe afọ abụọ gasịrị, ọ gbazitere ụlọ na-adọba ụgbọala n'ebe dị iche iche site n'ụlọ mama ya.Ọ gụsịrị akwụkwọ sekọndrị ma laghachi azụ ịmụ ihe. Ka oge na-aga, oge ahụ kwuru, sị: "M ka nọ n'ime obi - na m ga - abụ onye na - eto eto na - egbu egbu."
N'oge ọ na-eto eto, ọ dara oké ịda mbà n'obi na-enwe ọchịchọ igbu onwe ya.Na Beverly Hills High School, ọ na-enwe mmetụta nke owu na-ama n'etiti umu nke ezinụlọ bara ọgaranya gburugburu ya, ọ bụkwa isiokwu nke ịkwa emo n'ihi ahụ dị egwu ma na-etinye mbadamba na ihe nkwado.Ọ na-esiri ya ike inwe nkwurịta okwu mmetụta uche na ndị gbara ya gburugburu, ya mere, ọ malitere ibute onwe ya.Ka oge na-aga, ọ sịrị, "Anọ m na-achịkọta knives na enwere m ihe ụfọdụ gbasara m. Ememe ahụ, nke m ji sliced ​​ma nwee obi mgbu, nyere m echiche nke ndụ, ụfọdụ ụdị ntụrụndụ, n'ihi ihe ụfọdụ ọ na-emetụta m. "Ọ malitekwara ịṅụ ọgwụ ọjọọ; na 20, o nweworị ahụmahụ na "ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọgwụ ọ bụla" gụnyere heroin.
Mmekọrịta nke nna nwere nsogbu mgbe nile. N'ihi enweghị okwukwe nke Voight, nke bụ ihe mere eji agba alụkwaghịm ndị di na nwunye ya, nna ya anọwo na-anọpụ iche ruo ọtụtụ afọ.Iji meziwanye mmekọrịta n'oge ọgbọ puku afọ, ha na-egwuri egwu na Lara Croft - Tomb Raider. Ma mgbe ahụ, mmekọrịta ahụ mekwara ka njọ.Na July 2002 jụrụ, n'oge ọ jụrụla aha Jolie ogologo oge, iji gosi onwe ya dị ka onye na-eme ihe nkiri. Ọ bụ ya mere ọ rịọrọ ka a kpọọ aha ya ka ọ wepu aha nnabata Voight, bụ nke 12 kwadoro. September 2002.N'August nke afọ a Ka a kpọsara magazin ahụAccess Hollywoodna nwa ya nwanyị nwere "nsogbu nche echiche siri ike".Ná nzaghachi, nwa nwanyị ahụ kwuru na ọ chọghị ka ya na papa ya ọzọ.O kwukwara na n'ihi na nwa Maddox nakweere ya, o cheghị na ọ ga-adị mma iji nọgide na Voight.Naanị afọ isii mgbe nne ya ọ hụrụ n'anya nwụrụ na 27. January 2007, ọ dịkarịa ala nkwekorita oge dị n'etiti Angelina na nna ya.
Mgbe ọ bụ 7 ruo ọtụtụ afọ, ọ nwetara obere ọrụ na fim ahụLookin 'ga-apụ(1982). Nna ya, Jon Voight, bụ onye dere edemede ahụ, na-egwuri egwu na fim ahụ. Na 16, o kpebiri ka ya na-arụ ọrụ. Ná mmalite, o nwere nsogbu na ule nyocha igwefoto, a na-ebo ya ebubo na ọ bụ "oke ọchịchịrị."Ọ na-egwuri na ise na-amụrụ fim nwanne ya nwoke, bụ ndị gbara n'oge ya akwụkwọ na USC School of Cinema-Television. Angelina nwekwara starred na ọtụtụ music videos, dị ka "Guzo My Woman" by Lenny Kravitz (1991) "Alta Marea" by Antonella Vendittiho (1991), "Ọ bụ About Time" site The Lemonheads na "Rock na Roll Nrọ Bịa Site n'aka" site Meat ogbe achịcha (1993).
Ọ malitere ọrụ nkiri ọkachamara na 1993 mgbe ọ meriri ibu ọrụ mbụ ya na ihe nkiri sayensị dị ala na-emefu egoCyborg 2 - Glass Shadow. Akpara ya, Casella "Cash" Reese, bu robot humanoid nke nwere nzube bu ibute ulo oru ulo oru nke onye iro ma gbasaa ebe ahu (obuna n'agbanyeghi na enwere ihe gbasara nwanyi). Angelina nwere obi nkoropụ na fim ahụ na ọ nọ na-agba ọsọ maka ihe karịrị otu afọ na nyocha.Maka obere ọrụ na-esere onwe yaO nweghị ihe akaebe1995 kpakpando na mbido Hollywood mbụ yaNetwork dị ize ndụọrụ nke hacker Kate "Acid Burn" Libby.The New York Timesha dere, sị: "Kate (Angelina Jolie) karịrị. Ma eleghị anya, n'ihi na ọ na-eleba anya karịa ndị ọrụ ya. N'etiti ha bụ nke a, na omume, nwanyị dị egwu nke na-anọdụ na kọmputa ma na-ekiri na ihuenyo. Okposụkedi emi enye ọfọnde, emi ekedide utom esie, enye ama ọfiọk se enye eketiede ke ete esie, Jon Voight. "Ọ bụ ezie na ihe nkiri ahụ enweghị ihe ịga nke ọma na cinima, ọ ghọrọ ihe nkiri nzuzo mgbe ọ na-etinye ya na videotapes.
Na 1996, Angelina na-akwado ọrụ dị egwuAgbamakwụkwọ a zoro ezo, nke a na-eme ugbu a na Romeo na Juliet, tinyere ebe obibi abụọ nke Ịtali nwere mgbagwoju anya nke nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Bronx. Na fimỌnwa n'elu ọzaraEgwuru egwu nwa agbọghọ nke hụrụ nwa nwoke tọrọ (Danny Aiello) n'anya mgbe ọ na-egosi nne ya (Anne Archer). N'agbanyeghị na 1996, Angelina na-egwuri egwu na fim ahụFoxfireMargret "Ụdọ" Sadovsky, otu n'ime ụmụ agbọghọ nọ n'afọ iri na ise ga-ejikọta mmekọrịta dị iche iche mgbe ha merụrụ onye nkụzi nke na-amagbu ha.Los Angeles Timesdere, sị: "Ọ bụ otu isiokwu, ma Jolie, ada John Voight, adịghị eguzogide stereotype. Ọ bụ ezie na a kọrọ akụkọ ahụ n'aka Maddy, Legs bụ ihe dị mkpa na ihe mmemme maka ime ihe. "
Na 1997, ya na David Duchovny na-egwu egwu n'egwuregwu ahụAka site n'ọbara, bụ onye akụkọ ya mere na Los Angeles. Na ndị nkatọ fim ahụ adaala; Roger Ebert kwuru, sị: "Angelina Jolie [...] na-etinye okpomọkụ ka ọ bụrụ ebe ọ ga - esi ike ma na - eme ihe ike; ọ dị ka ọ dị nro ka ọ bụrụ enyi nwanyị Blossom, ọ ga-abụ. "N'ikpeazụ, Angelina na-egwuri egwu na TVEzi ndị inyom, akụkọ ihe omimi nke si na Wild West dika akwukwo Janice Woods Windle. Ọ rụrụ dị ka onye na-agba egwú na vidio egwú maka abụ "Onye ọ bụla hụrụ nwa m?" Site na Rolling Stones.
Ọrụ ya malitere ịrị elu mgbe ọ meriri Golden Globe maka ọrụ na TVGeorge Wallacesite na 1997. Ọ na-egwuri egwu ebe a Cornelia Wallace, bụ nwunye nke abụọ nke onye ọchịchị Alabama George Wallace, nke Gary Sinise dere. Ihe nkiri ahụ nwere ezigbo nkatọ ma merie, n'etiti onyinye ndị ọzọ, Golden Globe maka Best Film (miniseries ma ọ bụ TV). Maka ọrụ ya, a họpụtara ya maka Emmy Award.
Na 1998, ọ dara ụra na HBOGIA. Ọ mere Giu Carangi supermodel ebe a. Ihe nkiri ahụ edepụtala ọrụ nke ihe a ma ama na karịsịa ọdịda nke ọrịa heroin na ọnwụ AIDS na-aga n'etiti 80. ụgbọ elu 20. narị afọ. Vanessa Vance nke Reel.com kwuru, sị: "Angelina Jolie emeela ka amara ya maka ọrụ ya dị ka Gii, ọ dịkwa mfe ịghọta ihe mere. Jolie dị n'ọhịa ya, n'enweghị ihe ọ bụla - jupụtara na waaji na asịrị, obi ụtọ na obi nkoropụ - na àgwà ya dị ka ọmarịcha egwu mmadụ nke akụkọ ihe nkiri. "Na nke ugboro abụọ, Angelina meriri Golden Globe ma họpụta ya maka Emmy Award. O meriekwa Onyinye Akara Guild Award maka oge mbụ.
N'ikwekọ n'echiche nke usoro ihe omume, Lee Strasberg, na ọtụtụ n'ime fim ndị mbụ ọ na-eme, na-anọgide na-arụ ọrụ nke eserese ihe nkiri nke si na ya nweta aha onye omeewu nke siri ike ịrụ ọrụ. Mgbe na-ese fotoGiiọ gwara di ya mbụ, bụ Jonny Lee Miller, na ọ gaghị enwe ike ịkpọ ya: "Aga m agwa ya, 'Ọ bụ naanị m. Ana m anwụ. Abụ m nwa nwanyị nwanyị. Agaghị m ahụ izu gị. ' ("M ga-asị" Ọ bụ naanị m, m na-anwụ anwụ, abụ m onye nwere mmasị nwoke, agaghị m ahụ gị maka izu ole na ole. ")Mgbe agbapụGiimara ọkwa na ọ ga-ejedebe na-eme ihe n'ihi na "ọ na-eche na ya enweghi ihe nkiri".Ya na Miller gbara ya ma kwaga New York, ebe o debanyere aha na Mahadum New York iji gụọ usoro ihe nkiri na usoro nchịkọta akụkọ; emesia kọwara oge a dika "odi nma ichikota".Mgbe o meriri Golden Globe maka ọrụ dị na fim ahụGeorge Wallacena ịkatọ ihe nkiri ahụGIAo kpebiri ịnọgide na-arụ ọrụ.
Ọ laghachiri na fim ahụ na 1998 gangsterMpụ na ntaramahụhụ na NYC. N'otu afọ ị na-egwuri egwu na fim ahụỤdị ịhụnanyatinyere kpakpando dị ka Sean Connery, Gillian Anderson, Ryan Phillippe, na Jon Stewart. A na-ekwukarị ihe nkiri a ma kpọọ ya.San Francisco Chronicle"Jolie, bụ onye e dekọrọ ọrụ ya n'ihe odide ahụ, na-egbuke egbuke dị ka nwanyị na-egwu egwu egwu na-achọpụta ihe ọ dị njikere ime." Angelina nwetara onyinye nrite nke Breakthrough nke si n'aka National Board of Review of Pictures Pictures.
1999 kpalitere na ihe nkiri egwuregwuCrazy Runwaytinyere John Cusack, Billy Bob Thornton na Jon Stewart. A gwakọtara ihe nkiri ahụ, a katọrọ ya maka ọrụ ya dị ka nwunye Thornton na-adọrọ adọrọ.The Washington Postdere, "Mary (Angelina Jolie) bụ uche na-adịghị ihe e kere eke screenwriters, free-spirited nwaanyị ebe ákwá n'elu hibiscus usychajícími, yi a turquoise yiri mgbaaka na-eti mkpu mgbe Russell (Thornton) emefu dum, ehihie na abalị n'ụlọ.N'ikpeazụ, Angelina nọ na Denzel Washington nọ na-egwu egwuOnye nchịkọta ego, nke Jeffrey Deaver dere site na otu aha. Jolie jere otu onye uweojii na-enweghị uche na-enyere ya aka na-enyere onye ahụ na-ahụ maka ọbara ọbara aka (Washington) kụrụ onye gburu egbu. Ihe nkiri a enwetala ọtụtụ nde dollar n'ụwa nile,ma ndị nkatọ emezughị.Detroit Free Pressọ sịrị, "Jolie mara mma mgbe niile, mana o yighị ka ọ ga-arụ ọrụ."
Jolie wee pụta dịka otu n'ime mkpụrụ anụ ọhịa dị ugbu a, ụgbụ agha a na-achịkwaghị achịkwa, mana n'ụzọ ziri ezi na-adabere na ya.
Roger Ebert ka Angela na-eme ihe nkiri ahụNsogbu(1999)
Angelina gwakwara Lisa Rowe, nwa agbọghọ sociopathic, na ụlọ ọgwụ psychiatric na ihe ngosiNsogbu, mmegharị nke autobiography nke Susanna Kaysen. Winona Ryder, bụ onye nwere olileanya na ihe nkiri a ga-abụ nnukwu nlọghachi, na-edu ndú. Kama nke ahụ, ihe ngosi a bụ nnukwu ihe ịga nke ọma na ọrụ Angelina ma mesịa mee ka ọ dị n'etiti ndị kpakpando Hollywood kasị ukwuu. O meriri nke atọ Golden Globe Award, Onye Nkiri Onyenyo Guild Award, na Ụlọ Akwụkwọ Academy Award for Best Acting Actor. Ọdịiche dị iche iche kwuru, sị: "Jolie karịrị nwa agbọghọ na-enwu ọkụ, nke na-adịghị echebara echiche, bụ onye nwere mmetụta nke ọgwụ Susan na-aba uru karịa usoro dọkịta."
Na 2000, ọ na-egwuri egwu na ndagwurugwu mbụ nke okpomọkụ ya60 sekọnd. O mere Sarah "Sway" Waylende, onye bụbu enyi nwanyị nke Nicholas Cage ohi. Ọrụ dị obere naThe Washington PostỌ sịrị: "Ihe niile na ihe nkiri a na-eme na-guzo gburugburu, oyi stares ma na-arụ uru pad na otú provocatively na gbara ya ọnụ." Mgbe e mesịrị Angelina kọwara na ọrụ a film na ọ bụ a welcome enyemaka mgbe mmetụta uche-achọ ọrụ nke Lisa Rowe na filmNsogbu. Ihe nkiri ahụ aghọwo ihe nkiri kasị mma nke azụmahịa ebe ọ bụ na ego ntinye ego nke ụwa bara 237 nde dollar.
Ihe ịga nke ọma n'ụwa: 2001-2011
Angelina Jolie ke mbido fimAlexander the Greatna Cologne na 2004
Ọ bụ ezie na nnyocha ndị a na-akwanyere ya ùgwù dị ukwuu, ihe nkiri ya emebeghị ka mmasị ọha mmadụ mara ya. Naanị ihe nkiri ahụLara Croft - Tomb RaiderAngelina mere kpakpando nke uwa nke uzo mbu. N'ihi ọrụ nke Lary Croft's archeologist na-eme mgbanwe na-ewu ewu Tomb Raider egwuregwu usoro, Angelina nwere ịmụta asụsụ Bekee ma na-enweta ọzụzụ ịma aka ọgụ. Emere ihe ngosi ya na ihe nkiri ahụ, ma fim n'onwe ya bụ ihe a na-akatọ. MagazinSlant"A mụrụ Angelina Jolie maka ọrụ nke Lary Croft, mana (onye nduzi) Simon West mere ka ọ bụrụ njem oge ochie."Ihe nkiri ahụ bụ, Otú ọ dị, azụmahịa na-aga nke ọma, ụwa nile nwetara 275 nde dollar,ma na-eduzi Angelina na kpakpando edinam edinam akara.
Na fimMmehie asaaEjiri "nwanyị na-alụ ọhụrụ", na-ezochi ihe omimi nzuzo. Onye ya na ya na-arụkọ ọrụ, bụ onye ahịa Cuban bara ọgaranya, na-akpọ Antonio Banderas. Ihe nkiri ahụ, bụ nke Cornell Woolriche dere, emezughị.Na ihe nkiri ọzọNdụ ma ọ bụ ihe dị otú ahụAngelina rụrụ ọrụ nke onye na-ede akụkọ telivishọn dị oké egwu bụ onye buru amụma na ọ bụ nanị otu izu ka ọ fọdụrụ. Ihe nkiri ahụ na-abụkarị mkpesa na-ezighị ezi, ọ bụ ezie na ọ bụ ọrụ ebube Angelina. Paul Clinton na CNN kwuru, sị: "(Angelina) Jolie mara mma na ọrụ ya. N'agbanyeghị obere ihe ịsụ ngọngọ n'etiti etiti ihe nkiri a, onye a na-enye onyinye nchịkwa na-eme ka ọ mara ihe ọ ga-eme iji nweta ihe ọmụma nke onwe ya na ịghọta ezi nzube nke ndụ. "
Angelina Jolie na 2007 Film Festival na Cannes
A na-emeghachi ọrụ nke Lary Croft, onye ọkà mmụta ihe ochie, na fim ahụLara Croft - Tomb Raider: Ihe nkwado nke ndụ(2003). Ihe nkiri a aghọwo otu n'ime ndị inyom Hollywood a kacha akwụ ụgwọ.Ihe ndi a enweghi ihe iga nke oma dika ihe nkiri mbu, ma o nwetara 156 siri ike nke otutu nde dollar gburugburu uwa.Angelina gwakwara na korn "Oge m" video nke korn, nke a na-eji kwalite fim ahụ. Angelina na-egwuri egwu na fim ahụÓkè ókè. Ọrụ nke otu nwa agbọghọ si n'ogo dị elu bụ onye a họpụtara ịrụ ọrụ maka ndị ọrụ ebere na mpaghara ndị metụtara Africa na Eshia yiri ka ọ na-egosipụta ezi ndụ ya, ebe ọ na-etinye aka na òtù ndị mmadụ. Otú ọ dị, ihe nkiri ahụ nwere nzaghachi ṅara ṅara ṅara ndị nkatọ ma ọ bụghị nke azụmahịa.
Na 2004, ọ na-egwu n'akụkụ Ethan Hawk na fim ahụOnye ohi nke ndụ. O mere otu onye na-elekọta FBI ebe a na-agagharị n'okporo ụzọ nke na-egbu egbu, bụ nke na-eweghara onye ọ bụ. A gwakọtara nnyocha ahụ,The Hollywood Reporter"Angelina Jolie na-arụ ọrụ nke na-eme ka ị dị ka ị hụtụrụla ya mbụ, mana ọ na-eme ka ngwakọta na-enweghị atụ."Angelina nyere olu nke azù Na-abanye na fimAkụkọ nke shark, mgbe ahụ, na-arụ ọrụ dị nta na mmegharị ọchịỤwa nke echi. N'agbanyeghị na 2004, ọ na-akpọ Olympias, nne nke onye edemede bụ Alexander Veliký. Na cinemas America, ihe nkiri ahụ adaala mgbe ọ na-enweta naanị 34 nke ọtụtụ nde dollar. Onye isi nkuzi Nkume Oliver kwetara na ya na Alexander na-enwe mmekọahụ na-egosi na fim ahụ.Otú ọ dị, n'ụwa nile, ihe nkiri ahụ na-aga nke ọma, n'èzí United States nwetara 133 nke ọtụtụ nde dollar.
Na 2005, Brada Pitt na-egwu egwu na fimMr. & Mrs. Smith. The film agwa akụkọ di na nwunye, onye olu bụ adịghị anya site ida, ma ọnọdụ ngwa ngwa gbanwere mgbe banyere onwe ha na-ahụ na ha na-mgbagbu na-arụ ọrụ maka mpi ụlọ ọrụ. Film-akatọ ama weere, ọ jara akpan akpan n'ihi ihe ndị magburu onwe-arụ ọrụ onwu n'etiti abụọ isi odide.Star Tribunekwuru, sị: "Ọ bụ ezie na akụkọ ahụ na-agba chaa chaa, ihe nkiri ahụ na-ebugharị amara, ume ọkụ, na ihe ọkụkụ dị egwu n'etiti kpakpando abụọ."N'ụwa nile, 478 nwetara ọtụtụ nde dollar, na-eme ka ọ bụrụ nke asaa kasị nwee ihe ịga nke ọma nke afọ 2005 na United States.
Angelina Jolie dị ka Christine Collins na esereseMgbanwena 2007
Ke 2006, enye ama adaha ke Robert de NiraIhe CIA. Ihe nkiri ahụ na-akọwa afọ ndị mbụ nke CIA na anya Edward Wilson, onye na-achọ oké egwu na-akpọ Matt Damon. Angelina weere ọrụ nke Margaret "Clover" Russell, nwanyị na-eleghara Wilson anya. Dị kaChicago Tribune, "Jolie na-ekwenye na ịka nká n'oge nile nkiri ahụ ma ọ bụ enweghị nchegbu n'echeghị otú mmetụta ya si dị egwu."
Ebu ụzọ nyochaa ọrụ nke onye nhazi ahụ na 2007 na ihe nkiri vidioEbe na Oge, nke na-ejide 27 kwa ụbọchị kwa ụbọchị n'ụwa niile. Ọ bụ ihe nkiri agụmakwụkwọ bụ nke e mere iji hụ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị America.Angelina meziri ọrụ Mariana Pearl na ihe ngosi ihe nkiriIke nke obi. Ihe nkiri ahụ, nke dabeere na ncheta nke Mariane Pearl, na-edepụta ịmalite na igbu ọchụ nke di ya, onye nta akụkọ Daniel Perle, ndị na-eyi ọha egwu Pakistani na 2002.The Hollywood Reporterọ kọwara Angelina na-eme ihe ndị a: "Ọrụ ya dị mma, ọ na-agagharị, ọ na-akwanyere ùgwù, ọ na-enwekwa ike ijikwa nkwurịta okwu siri ike."A họpụtara Angelina maka onyinye Golden Globe Award na Screen Actors Guild Award. Na 2007, ihe nkiri ahụ bịarutekwaraBeowulf, bụ nke a na-emekarị site n'iji ihe ndị e ji emegharị ihe, ebe Angelina na-arụ ọrụ nke nne Grendel.
Na 2008, ya na James McAvoy na Morgan Freeman nọ na-eme ihe nkiri. Ihe nkiri ahụ nwere nkwenye dị mma, ọ na-enwekwa ọganihu nke azụmahịa mgbe 342 nwetara ọtụtụ nde dollar n'ụwa nile.Angelina nyekwara Mistr Tigrice olu na kung Fu Panda. Site na 632 zuru ụwa ọnụ nke nde dollar, ihe nkiri ahụ ghọrọ ihe nkiri nke kachasị mma nke afọ 2008.N'agbanyeghị na 2008, Angelina rụrụ ọrụ dị mkpa na ihe nkiri Clint EastwoodMgbanwe.Na film, nwere obere dabeere kpọmkwem kidnappings na-egbu na Los Angeles ebe ke 1928, Angelina egwuri Christine Collins, a na nne bụ onye nọ 1928, mgbe ọnwa ise, hụghachi ya Milton nwa - na na-achọpụta na nwa okoro, onye uwe ojii azọrọ na ya bụ nwa ya, bụ onye na-aghọ aghụghọ.Chicago Tribune"Jolie na-enwu gbaa jụụ n'ihu oké ifufe ahụ, na ebe nkiri [...] ebe onye isi na-enupụ isi ma wedaa ya ala, nke ọzọ na-eme ya."A họpụtara Angelina maka onyinye Award Academy (Oscar), Onyinye Globe Globe, Ihe Nkiri Ndị Na-eme Ihe nkiri na Guitar Award na BAFTA Award.
Angelina Jolie na-akwalite ihe nkiri ahụnnuna Comic-Conu na San Diego na 2010
Ihe nkiri ọzọ bịara mgbe ihe karịrị otu afọ zuru, na 2010 na fim ahụnnuOnye na-ahụ maka CIA Evelyn Salt, onye ga-agbapụ n'agbata ụlọnga KGB na-ebo ya ebubo na ọ bụ mmadụ abụọ na-arụ ọrụ maka ndị Russia. Ebu ụzọ dee ya dị ka mmadụ, mana mgbanwe gbanwere mgbe ụlọ ọrụ Colombics gwara Phillip Noyce maka ọrụ Angelina. Ihe nkiri ahụ enwetawo ọganihu mba ụwa na nsonye 294 zuru ụwa ọnụ nke nde dollar.Ejikọtara ndị nkatọ gaa na nke ọma, ọrụ Angelina bụ otuto; magazinAlaeze Ukwu"Mgbe a bịara n'ire ihe na-enweghị obi abụọ, onye nzuzu, nke na-adọrọ adọrọ, Jolie enweghi ịsọ mpi n'ahịa."Angelina gwakwara ya n'akụkụ Johnny Depp na fim ahụ. Ihe nkiri ndị nkatọ emezughị kpamkpam, dịka ọmụmaatụ, Peter Travers dere, sị: "Depp na Jolie adaala n'ala, na-achọ ka zombie ejiji nke ọma.Otú ọ dị, mgbe mmalite nke cinemas America, fim ahụ mechara nweta ọtụtụ nde dollar nke ezigbo 278 n'ụwa nile.Angelina natara nrhoputa nke Golden Globe, nke ekwuputara na nani ihe kpatara ya bu iji me ka ndi mmadu mara ihe ndi mmadu na-adi nma ma obu ndi mmadu.
Na 2011, Ngọzi Nwanyị Na-akọghachi ihe nkiri ahụ maka ihe nkiri maka ụmụakaKung Fu panda 2. The film ghọrọ a n'ụwa nile enwetakwa 666 nde dollar nke anọ kasị ọma film nke afọ 2011 na ka ndị kasị elu-grossing film na onye e kere eke na-eji Angelina.
Ọ gbanwere uwe ya maka oche onyeisi oche wee mee ihe nkiriNa mba ọbara na mmanụ aṅụ. The film na-akọwa akụkọ ịhụnanya n'etiti a Serbian agha na a Bosnian nwụdere n'agha n'oge agha na Bosnia na afọ 1992-1995. Angelina, bụ onye letara Bosnia ugboro abụọ na ndị ọrụ nke UNHCR Meere Amara nnochite anya, kọwara na film ga-achọ otu ugboro ọzọ lewe ndị ka na-emeso kpara nke na-adịbeghị anya agha.Ihe nkiri ahụ, nke Angelina dere ederede ya ma mee ya ụfọdụ, natara ma otuto na nkatọ na Balkans; mmeghachi omume site na Bosnia bụ "ihe dị oke mma", ebe ndị Serbia katọrọ ihe nkiri ahụ n'ihi esemokwu a na-ekwu banyere Serb.Angelina enyela ndi amaala Sarajevo maka ndi mmadu ka ha me ka mba uwa mara agha nke Bosnia.A na-enye fim ahụ Stanley Kramer Award site n'aka ndị na-emepụta Guild nke America, ụlọ ọrụ raara nye nsogbu ndị na-akpata mmekpa ahụ.Ihe nkiri ahụ meriekwa akara ngosi nke Golden Globe na Best Language Language.
Mgbe afọ atọ na ọkara kwụsịrị, 2014 meriri ọrụ na fim ahụMaleficent, nke sitere na ihe nkiri nke Walt Disney. Maka izu ụka mbụ ya, ihe nkiri ahụ nwetara ọtụtụ nde dollar site na 100.Maka oge nke abụọ, o weere òkè dị ka onye nchịkọta ihe nkiri, oge a na fim ahụIke.
Ejiri 2015 mee ihe maka ihe nkiri ahụSite n'Oké Osimiri, nke ya na di ya bụ Brad Pitt na-egwuri egwu.
Onye mbụ maara nke ọma soro ya afọ iri na anọ. Njikọ ahụ dịgidere ruo afọ abụọ. Nne ya kwere ka ha zute ya n'ụlọ, nke Angelina Jolie mechara kwuo, sị, "Ọ bụrụ na anyị na enyi m na-agagharị n'okporo ámá, ma ọ bụ na anyị nwere ike ịnọ n'ime ụlọ m na nne m n'ime ụlọ ọzọ. Nne m họọrọ nhọrọ nke abụọ, ọ bụkwa n'ihi nke a ka m na-ebili kwa ụtụtụ gaa ụlọ akwụkwọ na mmekọrịta m mbụ mụpụtara n'ụzọ dị nchebe. "Mmekọrịta ya na oge ahụ yiri ka alụmdi na nwunye ya siri ike, ọ gbakwụnyere na ọhụụ ahụ mere ka ọ kpebie ikere òkè zuru oke na ọrụ ya.
Mgbe agbapụ ihe nkiriNetwork dị ize ndụ1995 nwere mkparịta ụka dị mkpirikpi n'egwuregwu ihe nkiri nke Jonny Lee Miller. Ọ bụ onye ọ hụrụ n'anya kemgbe ọ dara mbà nke mmekọrịta ahụ dị n'elu.Mgbe ha na-ese ihe ruo ọtụtụ ọnwa, ha kwụsịrị ịkpọtụrụ, ma emesịa ha na 28 na-agbakọta. March 1996 soro agbamakwụkwọ. Angelina gosiputara na akwa uwe oji ya na uwe elu ya nke edere aha ya n'aha ya na ọbara ya.Angelina na Jonny mebiri na September 1997, ma alụmdi na nwunye gbara alụkwaghịm ruo mgbe 3. February 1999. Ọbụna mgbe ezumike ahụ gasịrị, ha nọgidere bụrụ enyi. Angelina mesịrị kọwaa, "Ọ bụ maka oge. Echere m na (Jonny) bụ ezigbo nwoke nwa agbọghọ ahụ nwere ike chọọ. M ga-ahụ ya n'anya mgbe nile, ma anyị dị nnọọ obere. "
Angelina Jolie na onye ibe ya Brad Pitt na Cannes Film Festival na 2007
Angelina ji mmekọrịta nwoke na nwanyị na Jenny Shimizu na-ese fotoFoxfirena 1996. O mechara kwuo, sị, "Ọ ga - abụ na m ga - achọ Jenny ma ọ bụrụ na anaghịzi m alụ di m. Ọ bụ ịhụnanya na ileba anya mbụ. "Shimizu gwara 2005 na mmekọrịta ha dịgidere ruo ọtụtụ afọ ma gaa n'ihu, ọ bụ ezie na Angelina nwere mmekọrịta ịhụnanya na ndị ọzọ.Na 2003, mgbe a jụrụ ya ma ọ bụrụ na ọ bụ onye na-ahụ maka mmekọahụ, ọ sịrị, "N'ezie. Ọ bụrụ na m hụ otu nwanyị n'anya echi, ọ dị mma ka ị susuo ya aka ma metụ ya aka? Mgbe m hụrụ ya n'anya? Chọpụta! Ee! "
Mgbe ọnwa abụọ nke alụmdi na nwunye ọ lụrụ 5. May 2000 na Las Vegas maka omee Billy Bob Thornton. Ha zutere iji gbaa ihe nkiriCrazy Runwayna 1999, ma mmekọrịta ahụ amaliteghị n'etiti ha, dịka Thornton ka lụrụ Laura Dern.Dika ihe di na Billy Bob nwere ike igosiputa onwe ya na ibe ya (onye obula n'ime ha nwere karama obara n'isi ibe ya) di na nwunye ha bu ihe ndi kachasi nma nke akwukwo tabloid.Na March, 2002 Angelina na Billy Bob kwupụtara ọkwa nwa nwoke si Cambodia, mana ọnwa atọ mgbe e mesịrị, otu mberede na-eso. Ndị gbara alụkwaghịm bụ 27. Mee 2003. Mgbe Angelina mesịrị rịọ maka ụda mberede nke alụmdi na nwunye, ọ sịrị, "Ọ bụ ihe ijuanya. Site na ihe ọ bụla, n'ụzọ nkịtị n'otu ntabi anya, anyị gbanwere kpamkpam. Na mberede, anyị enweghị ihe ọ bụla iji mee ya. Ọ dị egwu, ma ... echere m na ọ nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị banye ná mmekọrịta gị na ị maghị nke ọma. "
Ná mmalite nke afọ, 2005 tinyere aka na mkparị Hollywood mgbe a boro ya ebubo na ọ na-ebo ụda nke alụmdi na nwunye nke ndị na-eme ihe nkiri Brad Pitt na Jennifer Aniston. E boro Angelina na Brad ebubo mgbe ha na-ese ihe nkiriMr. & Mrs. Smith. Angelina gwakwara ya na otutu oge, ma emesia kwetara na ya na Brad amaere ya n'anya mgbe ha na agbapu.N'otu oge ahụ, 2005 kwuru, sị: "Mmekọrịta nwoke na nwanyị lụrụ mgbe nna m chegburu nne m bụ ihe m na-apụghị ịgbaghara. Enweghị m ike ile anya n'enyo ahụ n'ụtụtụ. Agaghị m adọta nwoke na-aghọ aghụghọ na nwunye ya. "Angelina na Brad ekwughị n'ihu ọha ruo na January 2006, mgbe Angelina gosipụtara magazin ahụndị mmadụBrad na-atụ anya nwa.N'April 2012 Angelina na Brad mgbe afọ asaa gasịrị, ha kwupụtara ọkwa aka.Ememe agbamakwụkwọ ahụ mere naanị afọ abụọ ọzọ, na 23. August 2014 na Chateau Miraval nke French, nso ndị ezinụlọ na ndị enyi.Di na nwunye, a makwaara aha ahaBrangelina, nwere mmasị dị ukwuu mgbasa ozi si n'akụkụ nile nke ụwa. 19. September 2016 gbara akwụkwọ arịrịọ Angelina Jolie rịọrọ maka ịgba alụkwaghịm na mkpe nke ụmụ na-elekọta naanị.
Ụmụ Angelina Jolie
mụrụ 5. August 2001 na Cambodia
nke 10 nakweere. March 2002 Angelina
nke 2006 Brad malitere na mmalite nke afọ ahụ
mụrụ 29. November 2003 na Ho Chi Minh City na Vietnam
nke 15 nakweere. March 2007
nke 21 nakweere. February 2008 Bradem
mụrụ 8. January 2005 na Awas na Etiopia
nke 6 nakweere. July 2005 Angelina
mụrụ 27. Mee 2006 na Namibia Swakopmunduv
mụrụ 12. July 2008 na Nice, France
10. March 2002 nakweere nwa mbụ ya, nwa nwoke asaa dị afọ bụ Maddox Chivan si na-elekọta ụmụ mgbei na Phnom Penh, Cambodia.A mụrụ 5. August 2001 na obodo nta ebe a na - akpọ ya Rath Vibol.Angelina choro ka o doo ya anya mgbe o gara Cambodia ugboro abụọ, maka oge mbu n'igosi Lara Croft - Tomb Raider na oge nke abuo na UNHCR. Akwụsịre usoro mmechi maka oge na December 2001 mgbe ọchịchị United States machibidoro ịbịpụta si Cambodia n'ihi akụkọ banyere ịzụ ahịa na ụmụaka.Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, Angelina na nwa ya nwoke gara Namibia ebe ọ na-ese fim ahụÓkè ókè.Ọ bụ ezie na Angelina na di ya, bụ Billy Bob Thornton, kwupụtara ọkwa ha dị n'otu, Maddox nabatara naanị ya.
Nwa nke abuo, otu nwatakiri nwoke aha ya bu Zahara Marley, bu onye si n'oru umuaka na Addis Ababa, Etiopia, 6. July 2005. Zahara mụrụ 8. January 2005 na Awash.N'oge a nakweere, e nwere echiche na-ezighị ezi na Zahara bụ nwa mgbei nke ndị nne na nna bu ọrịa AIDS, ọ pụtaghị ma ọ bụ ọrịa AIDS. Otú ọ dị, nnyocha ndị e mesịrị na-adịghị mma.Esisịt ini ke ama ama ekesịm USA, ẹma ẹnam Zahara ke ufọk-n̄kpọkọbi ke ntak udọn̄ọ ye udọn̄ọ.2007 gwara ndị mgbasa ozi na nne nne chọrọ Sugar azụ, ma ọ gọrọ na "Zahara nwere obi ụtọ na onye dị ka Angelina."
Angelina nwa ohuru na onye nduzi na onye nduzi Clive Eastwood na Cannes na ihe ngosi nke ihe nkiri aMgbanwena 2008
N'oge ọ gara Ethiopia maka obere Zahar, Brad Pitt esonyere.O meziri ka o doo anya na ndị e si na Etiopia bụrụ ndị ha ga-ejikọ aka.N'ọnwa Disemba, 2005, ọnụ ọnụ Brad kwuru ọkwa na Brad na-ezubere ịmụta Maddox na Zahar.N'ihe metụtara nke a, Angelina gwara ndị ọchịchị ka ha gbanwee aha ụmụaka nke Jolie-Pitt, bụ nke 19 kwadoro. January 2006.Ndị Brad nabatara ụmụaka abụọ obere oge.
N'ịgbalị ịgbanahụ ụgbụ mgbasa ozi, Brad, na Brad, abanyela na Namibia tupu a mụọ nwa mbụ ha. 27. Ike 2006, nwa ya nwanyị, Shiloh Nouvel, mụrụ na Swakopmund. Brad kwadoro na nwa ha ga-enwe paspọtụ Namibia.Di na nwunye ahụ kpebiri ịgbara mbụ Shalo Nouvel maka magazin a họọrọ, kama iwepụta paparazzi site na foto ndị dị mkpa. Magazinndị mmadụkwụrụ ụgwọ nde 4 maka ndebe North America mgbe magazin ahụNnọọ!kwụrụ 3,5 nde dollar maka ikike maka Islands nke Britain.Ego niile Angelina na Brad nwetara maka ire ere ka e nyere ụmụ Afrika na-echebe ụmụaka.
15. March 2007 nakweere nwa nwoke nke abụọ, bụ Pax Thien, dị afọ atọ, si na-akwagharị na Ho Chi Minh City, Vietnam. A mụrụ ya dị ka Pham Quang Sang 29. November 2003 na Ho Chi Minh City. N'oge na-adịghị anya mgbe a mụsịrị ya, a gbahapụrụ ya.Angelina nakweere Paxe n'onwe ya, dịka iwu ndị Vietnamese adịghị ekwe ka nkwenye nke ndị di na nwunye na-alụghị di.Ikike nke foto mbụ nke Pax mgbe e mesịrị ka e rere ọzọ na magazinndị mmadụmaka 2 ọtụtụ nde dollar naNnọọ!maka ọnụahịa a na-akọwaghị.N'April, Angelina rịọrọ ka e mee mgbanwe aha Pax nke aha Jolie na Jolie-Pitt, bụ nke 31 kwadoro. Mee 2007.Brad nabatara Paxe 21. February 2008.
Na Ememme Nkiri Cannes na May, 2008 kwadoro na Brad na-atụ anya ejima. Mgbe izu abụọ gasịrị na-eche ka a kpọga gị n'ụlọ ọgwụ dị na Nice, ndị nta akụkọ ahụ mara ụlọikwuu na mpụga na njem ahụ.Angelina 12. July 2008 mụrụ nwa nwoke Knox Léon na nwa nwanyị Vivienne Marcheline.A na-ere foto ndị mbụ nke ụmụ akwụkwọ na magazinndị mmadụnaNnọọ!mkpokọta maka 14 nke nde dollar. Enwere uru nye Foundation Foundation nke Jolie-Pitt.
19. September 2016 Angelina rịọrọ ka e nyefee ụmụ ha nlekọta na-elekọta ha.
N'etiti May, 2013 kwupụtara na ọ wepụrụ ara abụọ na February nke afọ ahụ maka igbochi kansa. O kpebiri ịgwa ya na 87% nwere ihe ize ndụ nke ịmepụta ọrịa ara ara na-agbanye n'ọkpụkpụ BRCA1.Ọrịa cancer ara na ovarian cancer tara ahụhụ site na mama ya nwụrụ na 56 afọ. Ọrịa cancer nke Ovarian bụkwa ihe kpatara nne nne ya ji nwụọ site na nne nne ya nwụrụ na 45 afọ. Ya mere, Jolie ewepụkwala ya ovaries; ihe ndị dọkịta na-ahụ maka ọrịa cancer mere atụmatụ na 50 percent.
Ụbọchị ole na ole mgbe ọkwa a gasịrị, 26. May 2013, Nwanyị Angelina Jolie, bụ Debbie Martin, bụ nwanne nne nwanyị nke nne nne ya nwụrụ. Ọ bụ 61 ụgbọ elu, ihe kpatara ọnwụ bụ ọrịa cancer ara.
Anyị enweghị ike imechi ụwa ma leghara eziokwu ahụ anya na ọtụtụ nde mmadụ na-ata ahụhụ n'ebe ahụ. Achọrọ m inye aka. Echeghị m na m dị iche na ndị ọzọ. Echere m na anyị niile chọrọ nhata na ikpe ziri ezi, ohere maka ndụ bara uru. Anyị niile ga-achọ ikwere na a ga-enwe onye nwere ike inyere anyị aka. "
Angelina Jolie na 2001 maka ihe mere o ji malite ịrụ ọrụ na UNHCR
Ya onwe ya na-azọrọ na ya bu ụzọ ghọta n'onwe ya oke nsogbu ụwa na-enyere mmadụ aka mgbe ọ na-ese vidio ahụLara Croft - Tomb Raiderna 2001 na Cambodia.Ọ kpọtụrụ Office nke Kọmishọna Ukwu nke UN maka ndị gbara ọsọ ndụ (UNHCR) na-arịọ maka ozi gbasara mpaghara nsogbu.Iji nweta nghọta kachasị mma banyere ọnọdụ ndị ahụ metụtara, ọ malitere ileta ogige ndị gbara ọsọ ndụ gburugburu ụwa. Na February 2001 malitere ozi mbụ ya, njem 18 na Sierra Leone na Tanzania; mgbe ọ laghachiri, ọ tụrụ ụjọ n'ihi ihe ọ hụrụ.N'ime ọnwa ndị na-esonụ, 14 laghachiri Cambodia ma gaa leta ndị gbara ọsọ ndụ na Afghanistan na Pakistan.Ọ na-egwuri egwu niile nke aka ya ma na-ekenye otu ọnọdụ ubi dịka ndị ọrụ UNHCR ndị ọzọ.27. N'August 2001, a na-akpọ Angelina UNHCR onye nnọchiteanya Ọtọọtọ na UNHCR Headquarters na Geneva.
Kemgbe ahụ, ọ gafeela ọtụtụ ọrụ enyemaka mmadụ gburugburu ụwa. O zutere ndị gbara ọsọ ndụ na ndị na-ezigara ha karịa mba 30 gburugburu ụwa.Mgbe a jụrụ ya ihe ọ ga-eme, ọ zara, sị, "Ịmara ọnọdụ nke ndị a. Echere m na ha kwesịrị inwe mmata n'ihi ihe ha mere kama ịbụ ndị a leghaara anya. "Ihe mgbaru ọsọ ya bụ ịga na ebe ọ na - akpọ "ọdụm echefu echefu," ebe ndị na-eme ka ndị mgbasa ozi gbanwee.A maara na ha atụghị egwu ịga ebe dị ize ndụ:2004 gara Sudan Darfur, ebe agha na ụnwụ dara n'oge ahụ;2007 gara Chad n'oge Agha Obodo;n'ime afọ 2007 gaa 2009 ugboro ugboro gara Iraq;ugboro ugboro gara Afghanistan n'etiti 2008 na 2011;gara Libya n'oge 2011 Civil War.
Mgbe ihe karịrị afọ iri gasịrị, 17 bụ Nnọchiteanya Ọmịaka. April 2012 ka a họpụtara onye nnọchiteanya pụrụ iche nke Kọmishọna Ukwu UNHCR maka ndị gbara ọsọ ndụ. Dị ka onye nnọchiteanya pụrụ iche, ọ na-anọchi anya UNHCR na Onye Kasị Elu (António Guterres) na ọkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma na-arụ ọrụ iji nweta ihe ngwọta dị ogologo oge maka nnukwu nsogbu ndị mmadụ, dị ka Afghanistan ma ọ bụ Somalia. "Ọ bụ ọnọdụ pụrụ iche na-egosipụta ọrụ dị mma ọ na-arụ maka anyị," ka otu ọnụ na-ekwu UNHCR kwuru.
Secretary Secretary nke State Condoleezza Rice na Angelina na World Refugee Day na 2005
N'ihe banyere ọrụ ya maka UNHCR, ọ na-eji mgbasa ozi ya na mgbasa ozi iji mee ka uche gaa n'ọnọdụ nsogbu ndị mmadụ na-ahụ n'ụwa. A na-edebanye akwụkwọ ndị mbụ ya n'akwụkwọIhe si na njem m, nke e bipụtara na mbido fim yaÓkè ókèna 2003. 2005 MTV wepụtara fim ahụMagazin Angelina Jolie na Dr. Jeffrey Sachs na Africa, bụ nke dere usoro Angelina na onye na-azụ ahịa Jeffrey Sachs na obodo ndị dịpụrụ adịpụ dị n'ebe ọdịda anyanwụ Kenya. Angelina na-akwalite ụbọchị mgbapụ ụwa na ihe ndị ọzọ.
Kemgbe ọtụtụ afọ, a na-agbasawanye ọgba aghara ndị mmadụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ na-agakwa ihe akara World Gbara Ọsọ Ndụ Day na Washington, DC. Ọ kpọrọ dị ka ọkà okwu na World Economic Forum na Davosuv afọ 2005 na 2006. Ọzọkwa zọrọ n'ihi nke kwesiri òtù na US Congress, ebe ihe atụ, n'agbata 2003 na 2006 dịkarịa ala 20x ekwu na kwụsị na congressmen na-asọ maka ihu ọma nke a Onyinye inyere ndị gbara ọsọ ndụ na-adịghị ike ụmụ ke atọ World na United States.Na 2006, o kwuru, sị, "Ọ bụ ezie na m ga-ahọrọ Washington ka ọ ghara ileta ya, ọ bụ naanị ụzọ a ga-esi mee ya."Na 2007, ọ ghọrọ onye òtù America Council for Foreign Relations.
O guzoro mgbe e guzobere ọtụtụ ọrụ ebere. Na 2003 guzosie ike a na ntọala Maddox Jolie-Pitt Foundation (ruo mgbe 2007 n'okpuru aha Maddox Jolie Project), nke na-akwalite mmepe oha obodo na gburugburu ebe obibi-echebe ndị Kambodia n'ógbè Egwu Dambang.2006 tinyere ngalaba Kọmitii Na-ahụ Maka Ahụ Ike Ụwa guzobere Phnom Penh na isi obodo Cambodia, Maddox Chivan Children's Center, nke na-enye nje HIV maka ụmụaka ndị nwere ọrịa.N'otu afọ, Angelina, ya na onye ọrụ ibe ya Brad Pitt, hiwere ntọala Jolie-Pitt, na-enye nkwado enyemaka mmadụ na gburugburu ụwa.Na 2007, Angelina, na Gene Sperling, guzobere Partnership for Children Conflict, nke na-enye usoro ọzụzụ maka ụmụaka ndị ọdachi na-eme ma ọ bụ ndị mmadụ kpatara.Na 2008 arụ ọrụ na Microsoftna oruru nke nzukọ Kids Mkpa of Defense, ihe òtù iwu sịrị, ụlọọrụ iwu ngalaba, otu oru Ngo na ndị ọrụ afọ ofufo na-enye ndị free iwu ọrụ nanị umu kwabata United States. Na 2010 na ọ tọrọ ntọala ngo Jolie Legal ibe Program, n'okpuru nke ọkàiwu na-akwado ndị ọchịchị na-eme iji chebe ụmụ na Haiti.
Maka ọrụ aka ndi mmadu nyere, o nwetara mmasi buru ibu. 2002 nwetara nriteOnyinye ndị mmadụsite na Nzukọ ụwa nke ụka.2003 ghọrọ onye na-agba chaa chaa nke mbụOnyenye nke Onyenye nke Ụwanke United Nations Correspondents Association nyere ya. 2005 nwetara nriteOnyinye Enyemaka Ndị Mmadụ Nilesite na United Nations nke United States of America.31. 2005, King Norodom Sihamoni, nyere ụmụ amaala Cambodia maka ọrụ ndị mmadụ na-ahụ maka ọdịmma ụmụ mmadụ na mba ya.2007, ya na Kọmishọna Ukwu nke UN maka Ndị Gbara Ọsọ Ndụ, António Guterres, natara Nrite Okike Nnwere OnweNnwere onwe nnwere onwe) sitere na Kọmitii Nzọpụta Mba (n'etiti ndị mmeri nke nrite a, n'etiti ihe ndị ọzọ, Václav Havel).Na 2011 ọ natara si UNHCR High Commissioner Antonio Guterres gold pin e fọdụrụ n'ezinụlọ-eje ozi UNHCR mkpara, na ude nke a afọ iri nke na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ Meere Amara nnochite anya.
N'ihi na 2014 ya bụ Queen Elizabeth II. na-akwalite elu ala.
4: Ike nke obi
5: Ọbịa (ihe nkiri, 2010)
6: George Wallace (ihe nkiri)
7: netwọk dị ize ndụ
8: Mmehie asaa ahụ
9: Nnu (ihe nkiri)
10: Onye Nwee Ndụ
11: Enweghị Ihe Akaebe
12: Ezi nwanyi
13: Ikpe CIA
14: Onye na-ede akụkọ Hollywood
15: Ụdị ịhụnanya
16: Ọnwa n'elu ọzara
18: Akụkọ nke Shark
19: Ndụ ma ọ bụ ihe
20: Kung Fu Panda na ememe a
21: Okporo ụzọ gbawara agbawa
22: Aka si na ọbara
24: 60 sekọnd (ihe nkiri, 2000)
25: Ọkpụkpọ Bone (Ihe nkiri)
26: Zombie - eze nwanyi anwansi
27: Mpụ na ntaramahụhụ na New York City
28: Cyborg 2 - Ojiji onyinyo
29: N'otu oge na nrọ
30: Nwa (aha)
32: Ọ na-agba
34: Lara Croft - Tomb Raider: Ihe Nkedo nke Ndụ
35: Maazi. & Oriaku Smith
39: Achọrọ (ihe nkiri)
42: 5. na Critics 'Choice Movie Awards
45: Golden raspberries maka 2004
Angelina Jolie Pitt, mụọ ya dị ka Angelina Jolie Voight (* 4. 1975 June na Los Angeles, California) bụ American film omee na Special Ụkọ nke UN High Commissioner maka Refugees. Ọ bụ nwa nwanyị American actor Jon Voight.
Emeghasịkwa na mbụ Girl, interupted ndị American biographical ejije dabeere na ebe nchekwa nke Susanna Kaysenové. Ihe nkiri a na-akọwa Susani dị ọnwa 18 na-anọ n'ụlọ ọgwụ psychiatric. Eduzi James Mangold, starring Susanna starred Winona Ryder. The film nwere a quality nkedo na-akwado ọrụ dị ka ha pụtara. Angelina Jolie, Whoopi Goldberg, Vanessa Redgrave, Jared Leto, Brittany Murphy na ndị ọzọ. Ntọala bụ 8. Disemba 1999, nkatọ sitere n'aka ndị nkatọ ahụ gbakọtara. Great arụmọrụ gosiri Angelina Jolie, onye ya akụkụ natara Academy Award (Oscar), a Golden Globe na a Screen eme egwuregwu Guild Award.
The Changeling bụ ihe nkiri American pụrụ iche site na 2008. Onye nhazi fim ahụ bụ Clint Eastwood. Angelina Jolie, Jeffrey Donovan, John Malkovich, Jason Butler Harner na Amy Ryan nwere mmasị na fim ahụ.
GIA bụ a TV nkiri banyere ndụ nke 1998 American supermodel Italian si Gii Carangiové Mary (Angelina Jolie na MILA Kunis). Michael Cristofer, onye na-edekọ ihe ederede, dere. Jay McInerney soro ya na-emekọ ihe na screenplay.
Obi America (Obi Dị Ike) bụ ihe nkiri American si 2007. Onye nduzi ihe nkiri bụ Michael Winterbottom. Uzo isi na fim a bu Dan Futterman, Angelina Jolie, Will Patton, Alyy Khan na Archie Panjabi.
Ndị ọbịa (na American mbụ: The Tourist) bụ ihe nkiri America nke 2010. Onye na-ahụ maka fim bụ Florian Henckel von Donnersmarck. Angelina Jolie, Johnny Depp, Paul Bettany, Timothy Dalton na Steven Berkoff kwadoro na fim ahụ.
George Wallace (nke mbụ American: George Wallace) bụ ihe nkiri American dị egwu site na 1997. Onye nduzi ihe nkiri bụ John Frankenheimer. Gary Sinise, Mare Winningham, Clarence Williams nke Atọ, Jon Don Baker na Angelina Jolie kwadoro na fim ahụ.
Network dị ize ndụ (American Original: Hackers) bụ ihe nkiri American nkiri na 1995. Onye nhazi nke ihe nkiri ahụ bụ Yain Softley. Jonny Lee Miller, Angelina Jolie, Renola Santiago, Matthew Lillard na Laurence Mason kwadoro na fim ahụ.
Mmehie nke asaa (Mmehie mbụ) bụ onye na-eme ihe nkiri American nke 2001. Onye nduzi ihe nkiri bụ Michael Cristofer. Antonio Banderas, Angelina Jolie, Thomas Jane, Jack Thompson na Gregory Itzin nọ na fim ahụ.
Nnu (Nnu Nnu) bụ ihe nkiri America nke 2010. Onye nhazi fim ahụ bụ Phillip Noyce. Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski na August Diehl kwadoro na fim ahụ.
Onye Nwee Ndụ (American Taking Living) bụ ihe omimi nke 2004 American. Onye nhazi fim ahụ bụ DJ Caruso. Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands na Olivier Martinez ama ama na fim.
Enweghi Ihe Akaebe (na American mbụ: Na-enweghị Ihe Akaebe) bụ onye na-eme ihe nkiri American 1995. Onye nhazi fim ahụ bụ Gill Dennis. Scott Plank, Anna Gunn, Andrew Prine, Angelina Jolie na Paul Perri dara na fim ahụ.
Ezigbo Ndị Nwanyi (Ezi Ndị Nwanyi) bụ ihe nkiri American sitere na 1997. Onye nduzi ihe nkiri a bụ Karen Arthur. Dana Delana, Annabeth Gish, Angelina Jolie, Tina Majorino na Rachael Leigh Cook kụrụ na fim ahụ.
Okwu CIA (nke mbụ nke American: Ezi Onye Ọzụzụ Atụrụ) bụ ihe ngosi nkiri nkiri America site na 2006. Onye nhazi fim ahụ bụ Robert De Niro. Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro, Alec Baldwin na William Hurt dara na fim ahụ. A na-agba ihe nkiri a dị ka ihe mere eme.
The Hollywood Reporter bụ magazin America nke dabeere na Los Angeles. Ntọala na September nke 1930 site n'aka onye ọchụnta ahia William Wilkerson. Mgbe ọ nwụsịrị na 1962, nwunye ya, bụ Tichi Wilkerson Kassel, weere ọrụ dịka onye nkwusa ahụ. Ọ rere ya na 1988 na BPI. Isi ihe na-eche banyere magazin a bụ ihe nkiri na ntụrụndụ, ma ọ na-elekwasị anya n'isiokwu ndị ọzọ dị ka ejiji, nkà na ụzụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Na peeji nke cover nke magazin bụ foto nke ndị dị iche iche; dị ka George Clooney, Leonardo DiCaprio na Angelina Jolie.
Ụdị ịhụnanya (American Original: Playing by Heart) bụ ihe nkiri American dị egwu site na 1998. Onye na-ahụ maka fim bụ Willard Carroll. Gillian Anderson, Ellen Burstyn, Sean Connery, Anthony Edwards na Angelina Jolie kwadoro na fim ahụ.
Ọnwa nke dị n'elu ọzara (nke mbụ Amerịka bụ Mojave Moon) bụ ihe nkiri vidio American site na 1996. Onye nhazi fim ahụ bụ Kevin Dowling. Danny Aiello, Angelina Jolie, Anne Archer, Michael Biehn na Alfred Molina kwadoro na fim ahụ.
Foxfire (na American mbụ: Foxfire) bụ ihe nkiri American dị egwu si na 1996. Onye nhazi fim ahụ bụ Annette Haywood-Carter. Egwuregwu Hedy Burress, Angelina Jolie, Jenna Lewis, Jenny Shimizu na Sarah Rosenberg rụrụ ọrụ dị na fim ahụ.
The Shark Story (American Shark Tale) bụ ihe nkiri animated nke si na 2004. Onye nduzi ihe nkiri ahụ bụ Vicky Jenson, Bibo Bergeron na Rob Letterman. Will Smith, Jack Black, Robert De Niro, Renee Zellweger na Angelina Jolie kpara na fim ahụ.
Ndụ ma ọ bụ ihe dị ka ọ bụ ihe nkiri American nkiri si 2002. Onye nduzi ihe nkiri bụ Stephen Herek. Angelina Jolie, Edward Burns, Tony Shalhoub, Christian Kane na James Gammon dara na fim ahụ.
Kung Fu Panda na eme ememe a (na American mbụ: Kung Fu Panda Holiday) bụ ihe nkiri American animated site na 2010. Onye nduzi ihe nkiri ahụ bụ Tim Johnson. Ọrụ kachasị na fim ahụ bụ Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Jack McBrayer na Jackie Chan.
Crazy Runway (American Pushing Tin) bụ ihe nkiri American nkiri na 1999. Onye nhazi fim ahụ bụ Mike Newell. John Cusack, Billy Bob Thornton, Cate Blanchett, Angelina Jolie na Jake Weber dara na fim ahụ.
Aka Site na Ọbara (na American mbụ: Egwuregwu Chineke) bụ ihe nkiri mpụ American nke 1997. Onye na-ahụ maka fim bụ Andy Wilson. David Duchovny, Timothy Hutton, Angelina Jolie, Michael Massee na Pita Stormare kwadoro na fim ahụ.
Ngalaba Na-agafe bụ ihe nkiri agha US nke si na 2003. Onye nhazi fim ahụ bụ Martin Campbell. Angelina Jolie, Clive Owen, Teri Polo, Linus Roache na Noa Emmerich kpakpando na fim.
60 Nke abụọ (Bekee Gaa na Isii Iri) bụ ihe nkiri American mere na 2000. Starring Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Christopher Eccleston, Robert Duvall, Vinnie Jones na Will Patton. Ihe nkiri ahụ bụ Dominic Sena na-eduzi fim ahụ, nke Scott Rosenberg dere. Ihe nkiri a bụ Jerry Bruckheimer (Rock, Armageddon). Nke a bụ ngbanwe nke onyinyo 1974 nke otu aha ahụ.
Onye na-ejide ọnụ bụ ihe nkiri mpụ American na 1999. Onye nhazi fim ahụ bụ Phillip Noyce. Denzel Washington, Angelina Jolie, Queen Latifah, Michael Rooker na Mike McGlone gụrụ na fim ahụ.
Zombie - Queen of Black Magic is a American dark fantasy film based on animated film fairytale Mma ụra na 1959. Onye nduzi bụ American Robert Stromberg. Angelina Jolie na-eduzi dị ka Zombie na Elle Fanning dị ka nwa-nwoke Aurora.
Mpụ na ntaramahụhụ na New York City (na American mbụ: Hell's Kitchen) bụ ihe nkiri American dị egwu site na 1998. Onye nhazi fim ahụ bụ Tony Cinciripini. Rosanna Arquette, Angelina Jolie, Mekhi Phifer, William Forsythe na Johnny Whitworth kwupụtara na fim.
Cyborg 2 - Glass Shadow (nke dị na American: Cyborg 2) bụ ihe nkiri America nke 1993. Onye nduzi ihe nkiri bụ Michael Schroeder. Elias Koteas, Angelina Jolie, Jack Palance, Jean-Claude Van Damme na Billy Drago kwadoro na fim ahụ.
Otu na nrọ bụ abụ nke onye America na-abụ abụ na onye na-ede egwú Lana Del Rey dere. E wepụtara ya na 26. January 2014 dị ka ụda ụda maka ihe nkiri fantasy nke Disney, Maleficent, ihe omume nke oge Dart's Rose. Onye isi egwu Angelina Jolie choro Lana ka o debe egwu a. Nleghachi ahụ chere ihu ọma dị mma. Ọbụna ụfọdụ dere banyere nsụgharị Lanin na ọ dị ntakịrị karịa nke mbụ. Nke a bụ egwu egwu kachasị na Google Play akụkọ ihe mere eme.
Checkers (fr. Dame ya. Dama, nwanyị, Sp. Donau) bụ a aha nke a noblewoman, na-emekarị na gentry, na-echeta onye uweojii nwaanyi Knights (nne Ẹkot a amara dika Knight, ma ọ bụrụ na nabatara na iji òtù). The kpọmkwem ojiji nke aha dị iche iche na-ekwu, (iche iche), ihe atụ, na UK aha nwaanyị (Dame na English) eji inyom na ebe ndị mmadụ na-eji aha Sir (ma na-eme ka ha otu ndokwa na asọpụrụ knighthood maka ụmụ amaala obodo ọzọ).
Andrew Edward Coulson (21. 1968 January) bụ a British novinář.V afọ 2003 ka 2007 bụ nchịkọta akụkọ nke tabloid akwụkwọ akụkọ News nke World.V July 2012 bụ Rebekah Brooks, tinyere isii ndị ọzọ ndi oru nta akuko na-na-etinye aka n'uzo na ezighi ezi wiretapping, ebubo nke " izu ọjọọ n'ihi nzube nke interception nke ndị mba ọzọ na nkwukọrịta enweghị kwesịrị ekwesị iwu ikike n'etiti 2000 na 2006 "a" nke ihe mgbochi nke ikpe ziri ezi "na nchoputa nke wiretapping. N'etiti odposlouchávanými bụ, n'ihi na ihe atụ, British Interior Minister David Blunkett na Charles Clarke, eme ihe nkiri Brad Pitt na Angelina Jolie na edu nsị Wayne Rooney.
Zatar bụ otu n'ime ndị kasị ibu ndị gbara ọsọ ndụ n'ogige ke ererimbot, emi odude ke edem edere Jordan, odika 11 kilomita site ókè na Syria, n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Jordanian obodo nke Mafraq. E mepee 28. July 2012 na-anabata ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị gbara ọsọ ndụ Siria n'ihi agha obodo ahụ. Ndị bi na ya na-adịkarị mgbe ọ na - agbanwe ngwa ngwa - n'oge oge kachasị mma ha, 25. Ike, 202 993 bi n'ebe ahụ. N'ozuzu, ọtụtụ puku ndị gbara ọsọ ndụ Siria nọ na 600 na Jọdan.
The Wren Scott, aha ọmụmụ Luann Bambrough (28, Eprel 1964 - 17, March 2014) bụ onye mmebe ejiji America. Ọrụ ya malitere na Paris na iri asatọ dịka ihe nlereanya. Mgbe e mesịrị, ọ malitere ịkpụ uwe; dịka ọmụmaatụ, maka ndị inyom dịka Angelina Jolie na Sarah Jessica Parker. A na-atụkwasị 2014 na ulo Manhattan New York na March. Site na 2001 ruo mgbe ọ nwụrụ, ya na onye ọbụ abụ bụ Mick Jagger, onye frontman nke ndị Britain bụ The Rolling Stones.
Lara Croft - Tomb Raider: Ihe nkwado nke Ndụ bụ ihe na-aga n'ihu nke Lara Croft - Tomb Raider si na 2003. N'ịbụ onye Jan de Bont duziri, Angelina Jolie weghachitere ọrụ Lary Croft. Ihe nkiri ahụ na-edekọ kama ọ bụ nchịkwa ọjọọ, mana ọhụụ nke usoro ihe omume dị mma masịrị ya tupu e nyeghachi ya otuto na arụ ọrụ nke Angelina Jolie. N'agbanyeghị nkatọ ndị ọzọ dị mma, ihe nkiri ahụ nwetara obere karịa onye bu ya ụzọ, ahịa zuru ụwa ọnụ mere 156,5 otu nde dollar.
Mazi. & Oriaku Smith bụ ihe omume America nke na-eduzi site na 2005 Doug Liman. Ọ na-akọ maka di abụọ, ha abụọ bụ ndị na-egbu ọchụ, ma ọ bụrụ na ha chọrọ ibi ndụ ha ga-alụ ọgụ megide ibe ha. N'ikpeazụ, Otú ọ dị, ihe niile ga-adị iche karịa nke mbụ echere ...
Kung Fu Panda bụ ihe nkiri ndị nkiri America nke si na 2008. Gwara site John Stevenson na Mark Osborne, odide kwupụtara site maara nke ọma American na Chinese eme ihe nkiri ndị dị otú ahụ dị ka Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan, Lucy Liu na ndị ọzọ. Ihe nkiri ahụ malitere na Cannes International Film Festival 15. May 2008 ma nwee obi ụtọ nke ọma maka ndị nkatọ na ndị na-ege ntị. Ọ ghọrọ ọgba aghara cha cha mgbe 631,7 nwetara ọtụtụ nde dollar n'ụwa nile. Na 2011, e mere kung Fu Panda 2.
Jay McInerney, aha zuru oke John Barrett McInerney Jr. (* 13. 1955 January na Hartford, Connecticut) bụ nke kasị dị ịrịba ama dịkọrọ ndụ American dere na-eto eto ọgbọ. Ọ bụ ya bụ akwụkwọ nke asatọ akwụkwọ ọgụgụ, otu onye nke Bright ọkụ, nnukwu obodo, Ransom, Nke ahụ Life na nlereanya omume, a sụgharịala Czech. Ọ bụkwa onye edemede nke akụkọ dị mkpirikpi na akwụkwọ abụọ na mmanya. O dere, sị na fim maka film mmegharị nke nchụàjà nke otu aha Bright ọkụ, nnukwu obodo, na ngalaba-dere TV nkiri banyere ndụ nke GIA American supermodel, nke isi ọrụ na-egwuri site Angelina Jolie. Ọ na - enyekwa aka na New York Magazine, Guardian Weekly na Corriere Della Serra.
Kung Fu Panda 3 bụ ihe nkiri vidio na-eme ihe nkiri American na Chinese site na 2016, nke a na-eme site na DreamWorks Animation ma kesaa site na 20th Century Fox. Ọ bụ Kung Fu Panda na Kung Fu Panda 2. Ihe nkiri a bụ Jennifer Yuh Nelson na Alessandro Carloni. Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Lucy Liu, Seth Rogen, David Cross, Jackie Chan na James Hong kwughachiri ọrụ ha na fim gara aga. Bryan Cranston, JK Simmons na Kate Hudson sonyeere nkedo ahụ.
Chọrọ bụ a German-American film dabeere na akụkọ nke na-atọ ọchị Mark Millar na JG Jones na afọ 2003-2004 (na Czech Republic, e bipụtara oru ugbo 2008). Ihe nkiri ahụ bụ Timur Bekmambetov, nke James McAvoy dere. Dịka ọmụmaatụ, Angelina Jolie na Morgan Freeman kwadoro ọrụ nkwado. Ihe ngosi a bu na 12 London. June 2008. Ememe Czech malitere izu abụọ, 26. June 2008. Egburu ụfọdụ ihe nkiri ahụ na Czech Republic.
Lara Croft - Tomb Raider bụ ihe nkiri nkiri na-adabere na usoro egwuregwu Tomb Raider na-ewu ewu. Ọ na-eduzi Simon West, Angelina Jolie nọkwa na-edu ndú na Lary Croft. Na cinemas American bụ ihe nkiri ahụ malitere 11. June 2001, 23 sonyeere cinima Cinemas. August 2001. Ihe nkiri ahụ ghọrọ 275 nde dollar na-ere ahịa mmemme kasị mma nke egwuregwu kọmputa. Nke a bụ na 2010 site na Prince nke Peshia: Time Sands na 335 nde dollar. Ịnabata fim ahụ bụ ihe na-adịghị mma, na-akatọ ndị inyom na-agafe agafe na ihe omume nke egwuregwu vidiyo. Emere Angelina Jolie ọrụ na ndu.
Michael Ivan Cristofer (* 22 January 1945, Trenton, New Jersey, United States) bụ onye American dramatist, screenwriter, director na omee. Maka The Shadow Box, o meriri Pulitzer Prize maka drama na Tony Award.
Kwa Afọ award-akatọ 'Choice Movie Awards ada itie ke 2000.Žebříček mma na fim (abiidii iji) American krásaInsider: Nwoke nke Maara Oke mnohoMagnoliaMuž ka MěsíciTři královéTalentovaný Mr. RipleyPravidla moštárnyŠestý smyslV John akpụkpọ MalkovicheZelená míleVítězové Best Film: krásaNejlepší American director Sam Mendes - American krásaNejlepší omee: Russell Crowe - na Insider: na Man bụ ndị maara kwa mnohoNejlepší omee: Hilary swank - Boys nepláčouNejlepší omee Michael Clarke Duncan - Green míleNejlepší Kwado omee: Angelina Jolie - NarušeníNejlepší ezinụlọ film: October nebeNejlepší animated film: toy akụkọ 2Nejlepší emegharị fim: Frank Darabont - The Green míleNejlepší mbụ fim: Alan Ball - American dere krásaNejlepší: The nkà Mr. Ripley - Gabriel YaredNejlepší Písnice ka: "Music nke My Heart" - Music nke srdceNejlepší eto eto omee / omee: Haley Joel Osment - Nke isii smyslReference
Rebekah Brooks (* 27. 1968 May, Warrington, Lancashire, United Kingdom) bụ a British novinářka.Známa bụ tumadi dị ka onye bụbu onye isi oche nke na-ekwusara ụlọ ọrụ News International (2009 ka 2011) Rupert Murdoch. Ọ na-arụ ọrụ dị ka ihe nchịkọta akụkọ nke tabloid akwụkwọ akụkọ News of the World (2000 ka 2003) na The Sun (2003 ka 2009).
Billy Bob Thornton (* 4. 1955 August, Hot Springs) bụ American omee, screenwriter, director na hudebník.Za ede maka èbè Agụba merie ndị Oscar maka Best E ede. Ọ bụ otu ihe oyiyi nke sharply accelerated ya ọrụ. Na ebe nchekwa nke na-ekiri na-ahụ aha ke ọgbụgba ọkụ Armageddon, Christmas ntochi Bad Santa (E nwekwara ndibọhọ a Golden Globe nomination) na dị ka US President na Christmas classic Ịhụnanya N'ezie. Ndị ọkachamara na-akacha amasị ya arụmọrụ na fim Igbu boomerang (Oscar nomination maka Best-eme ihe nkiri na a na-eduga ọrụ), Simple Plan (Oscar nomination maka Best Kwado Onye na-eme ihe nkiri), Outlaws (Golden Globe nomination) na nwoke na-abụghị (Golden Globe nomination) . Dị ka a na-agụ egwú tọhapụrụ anọ solo albums na ọtụtụ ndị ọzọ na a blues ịgbakọta The Boxmasters. Media ntị ma na dọtara alụmdi na nwunye na-eme ihe nkiri Angelina Jolie na afọ 2000-2003.
A mara ọkwa Golden Rasberi kwa afọ na Ivar Theatre na Hollywood. Ememe 25. Ndị na-eme mgbapụta na-ekwupụtakwa ọnụahịa nke ihe nkiri kasị njọ maka afọ 25 mbụ. Ọtụtụ ndị na-ede aha, asaa, meriri ihe nkiri Catwoman. Ememe iri abụọ na ise nke ememe mmeri ahụ kwukwara ọkwa dị iche iche. Nnyocha a kpaliri Golden Raspberries ịhapụ omenala ndị na-abụghị nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'afọ a. Nhọpụta bụ ihe nkiri nke na - adịghị njọ ma ọ bụ ọdịda ọdịda - Fahrenheit 9 / 11.
Philipp von Ostau (* 20 October 1966, Hamburg) bụ onye Germany na-ahụ maka ihe nchekwa na ọkachamara nkwurịta okwu. A mụrụ ya dị ka Hans-Fabian von Ostau nwa na Petry von Ostau mụrụ von Festenberg. Ọ na-ebi na Berlin ma na-arụ ọrụ dị ka onye na-anọchite anya onye nwe ụlọ, ebe 2010 rụrụ ọrụ dịka onye nkụzi na-enyere aka na Institute of Design in Berlin.
MgA. Catherine Hejlová (lụrụ di na-ehi ụra) (* 29. 1984 February, Litomerice) bụ a Czech edemede na překladatelka.Životopis Hejlová Catherine mụrụ Litomerice. Nwata hụrụ asụsụ na akwụkwọ, nke na-enwe mmetụta ya oke nke mahadum - gụsịrị Josef Škvorecký edemede Academy na Prague na a tọrọ ntọala so okike otu isi skelter (site na-eme HN: eze na ntu (2007) - Story Ikpeazụ Metro, Puku scars (2008) - akụkọ Mmaji chi nwaanyị, aka elu (2009) - ẹwot akụkọ a ụgbọ mmiri ụlọ, topless ... na m kwa (2010) - akụkọ Punch ya na-arọ nrọ na-ehi ụra (2011) - akụkọ Behind the mirror na aqua Mala.
Nickelodeon Kid's Choice Awards ama ada itie ke 20. April 2002 na Barker Hangar na Santa Monica, California. Rosie O'Donnell buru ụzọ. Ememe ahụ mere site na onye na-agụ egwú Pink.
William Bradley "Brad" Pitt (* 18. 1963 December Shawnee, Oklahoma) bụ American film omee,-eto eto nke a Golden Globe maka Best-eme ihe nkiri na a na-akwado Ọrụ, nke o nwetara n'ihi ya arụmọrụ na nkiri iri na abụọ Enwe (1995).